Internet jupụtara free na akwụ ụgwọ ngwa na-enye nyefee data site na otu ekwentị ọzọ. Ụfọdụ ngwa nwere ike n'ezie ihikosi usoro na-eri nnukwu ego nke internet (data) òkè dị ka mma. Ọ bụ ihe amamihe na-ahọrọ mfe usoro kwere omume. Ebe a bụ ụfọdụ ihe ndị pụrụ gosi na-enye aka mgbe na-ebufe data site na otu ngwaọrụ ọzọ.
The mbụ mma nke a ngwa bụ na data transfer bụ n'ihe ize ndụ free na usoro a wuchara ya n'ime nanị 1 Pịa. Mmepe nke ngwa anọgidewo na-enwe ụkpụrụ ndị dị elu nke professionalism mgbe na-emepe emepe a ngwa na maka otu ihe ahụ niile data gụnyere kọntaktị, ozi, chat ndekọ, music, kalenda na ngwa-anọgide na otu ụdị na-adịghị ọbụna a bit na-gbanwere . Ọbụna ma ọ bụrụ na onye ọrụ adịghị nwere ma ndị Ngwa na aka a ngwa bụ smart ezuru ịzọpụta data ka PC si ebe ọ nwere ike weghachiri eweghachi mgbe e mesịrị na-ngwaọrụ ọzọ wuru na kpamkpam dị iche iche technology. Na a ngwa ndị ọrụ nwere nnukwu ọtụtụ nhọrọ na data nwekwara ike kwadoo jidesie ngwa nkesa nke mere na ọ bụrụ na nke ọ bụla misadventure nkwado ndabere na mpaghara bụ n'ebe na-akwado ọrụ nke na-eme ngwa a a otu aka ngwọta maka niile iche iche nke mobile mmepe nyiwe.
Atụmatụ maka Blackberry ndị ọrụ na-eme atụmatụ ka ịgbanwee site na otu BB ngwaọrụ ndị ọzọ
Blackberry si ngwaọrụ Gbanye ngwa nwere ike nyefee ụfọdụ ụdị nke faịlụ site na otu ngwaọrụ ọzọ na-enweghị ejikọta ngwaọrụ na kọmputa. Otú ọ dị, Ngwaọrụ Gbanye ngwa na ụfọdụ ndị ọzọ ngwa nwere ike adịghị nyefee Blackberry ngwa, email ozi, ekwentị oku ndia, nchọgharị ibe edokọbara, ụfọdụ audio- video faịlụ, wdg Ya mere, na ijikọ ngwaọrụ PC yiri ka ndị kasị na kasị dịrị nchebe nhọrọ nyefee fọrọ nke nta niile ụdị nke faịlụ.
Mgbe ebufe ndenye kalịnda, ihe na Ama kọntaktị, na ndị ọzọ faịlụ, ngwaọrụ gị ghara ịchọpụta ha ozugbo. Nke a bụ nkịtị, na nwere ike ime mgbe ọ bụla ị nyefee nnukwu ego nke data site na otu ngwaọrụ ọzọ. Dị nnọọ na-eche maka nkeji ole na ole, ma na-agbalị na-achọ nchegbu data ọzọ.
Mgbe ụfọdụ, i nwere ike ọ gaghị enwe ike ịhụ ụfọdụ kọntaktsị na ngwaọrụ ọhụrụ ọbụna mgbe kpamkpam ebufe data si gị ochie ngwaọrụ. Ọ dịghị mkpa na-echegbu onwe; eleghị anya, kọntaktị gị-echekwara na ụfọdụ web dabeere na akaụntụ. Ndị nkọwa ga-akpaghị aka mmapụta on gị ozi ọma na ngwaọrụ ozugbo ị banye na-aka gị niile email na izi ozi ngwa.
Nke bụ ụzọ kasị mma nyefee data site na otu blackberry na ngwaọrụ ọzọ?
E nwere ọtụtụ ụzọ gụnyere Ngwaọrụ Gbanye ngwa na ike ga-eji nyefee data site na otu blackberry na ngwaọrụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, n'etiti ndị niile, ndị kasị mma nhọrọ bụ ibudata Blackberry si desktọọpụ software
Gaa Leta Blackberry si website, na ibudata na software.
Mgbe ahụ, wụnye BB desktọọpụ software na gị laptọọpụ ma ọ bụ PC.
Mgbe-emecha nwụnye usoro, jikọọ gị ochie Blackberry ngwaọrụ gị na kọmputa na USB ụdọ. The software ga-amata na ngwaọrụ gị na gosipụta handset si anam na nlereanya nọmba na ihuenyo. Ozugbo ngwaọrụ gị bụ anya na blackberry desktọọpụ software, pịa na "Back-elu na Weghachi" akara ngosi. Mgbe ahụ, pịa "Back-elu," ma họrọ "All data" nhọrọ ike azụ-elu maka dum data si gị ochie handset. Usoro ga-ike azụ-elu maka ekwentị gị data na PC n'ime nkeji ole na ole. The nchegbu faịlụ a ga-azọpụta dị ka ipd faịlụ na ụbọchị.
Mgbe eke azụ-elu maka gị ochie Blackberry ekwentị, wepụ ochie ekwentị, na jikọọ ọhụrụ gị Blackberry handset gị PC eji otu USB ụdọ. Ugbu a blackberry software ga ịchọpụta ọhụrụ gị na ngwaọrụ ma na-egosi ya aha na software si interface. Otu ugboro ọzọ, họrọ "Back-elu na Weghachi," ma họrọ "Weghachi." Mgbe ahụ, nanị pịa na faịlụ azụ-elu na ị kere si gị ochie ekwentị. Nke ahụ bụ ya! Niile data ga-agafere site na PC gị ọhụrụ gị Blackberry ngwaọrụ n'ime nkeji ole na ole.
Ọtụtụ ihe, ị ike ịhazi na ike azụ-elu maka ozi ederede, na ekwentị akụkọ ihe mere eme dị ka mma. Blackberry-azọpụta gị niile data na Blackberry Back-elu nchekwa na Nwela kere n'ime gị PC si akwụkwọ nchekwa.
Site akwụkwọ, ederede ozi, kọntaktị, ka video na ọdịyo faịlụ, Blackberry desktọọpụ software emepụta azụ-elu fọrọ nke nta niile ụdị nke faịlụ site na gị Blackberry ngwaọrụ.
Iji nyefee gị ngwa site na otu BB handset na nke ọzọ, dị nnọọ abanye na Blackberry ụwa si gị ngwaọrụ ọhụrụ, na-eji otu agadi ngwaọrụ ọrụ-id na paswọọdụ.
Ị nwere ike ịga "My World" ihuenyo na re-wụnye ngwa na e arụnyere na ochie ekwentị. Jide n'aka na ị nwere zuru ezu internet data òkè mgbe re-wụnye ngwa ọdịnala na gị ngwaọrụ ọhụrụ.
Nke Blackberry ngwaọrụ ị na-eji?
Ee, ọbụna nke a oge nke iPhone 6 gbakwunyere, e nwere ọtụtụ ndị ọrụ ka na-ahọrọ iji blackberry, ikekwe, n'ihi na nche atụmatụ na n'ozuzu ahụmahụ. Ụfọdụ n'ime ndị kasị ewu ewu blackberry na ngwaọrụ ndị Blackberry Omuma, Blackberry Passport, PlayBook, Blackberry Z3, Blackberry Q5, Q10, Blackberry Z10, Blackberry usoro 9360, Blackberry 9700 Bold 2, na blackberry ọwa 9800.
Ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya mere ka o na akụkọ ezikwa mwepụta nke ọhụrụ Tablet akpọ SecuTablet. Akụkọ-atụ aro na IBM mepụtara ụfọdụ azụmahịa software ngwọta maka a mbadamba na-nwetara ezu ga-eji Government ọrụ. Plus, ọ na-awade ngwa ọdịnala n'ihi ozi na-akparịta ụka n'Ịntanet. Ọkachamara kweere na nke a bụ Blackberry mgbalị ike multipurpose na ngwaọrụ na ike ga-eji ya arụ ọrụ na fun.
> Resource> Nyefee> otú nyefee data si Blackberry ngwaọrụ ọzọ Blackberry